Inhloko Zendaba Nhlolanja 18, 2022
*** Abekhomishini ebona ngezokhetho eye Zimbabwe Electoral Commission bathi akuphambani lomthetho ukusebenzisana kwabo labezomvikela loba izisebenzi zika hulumende zincedisa kundaba zokhetho.
*** Ibandla elibusayo leZanu-Pf basungule uhlelo lokukhankasela ukhetho lwamaBy-Elections oluzakwenziwa mhlaka 26 Mbimbitho. Lolu hlelo lusungulwe okusemthethweni ngumsekeli kamongameli walelibandla uMnu Kembo Mohadi lamhlanje elokitshini leNkulumane, koBulawayo ngekuthazo kuzulu ukuba ayebhalisela ukuvota ngoba kungasizi ukuza emhlanganweni ngobunengi abantu bengavoti.
*** Kuzaba kuphithizela ngempelasonto amabandla ezombusazwe egcwele ndawana yonke ekhankasela ukhetho lwamaby-elections oluzakwenziwa mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Kusasa umkhokheli weMDC-T uMnu Douglas Mwonzora uzakwenza umhlangano wakhe koBulawayo kuthi ngeSonto umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change (CCC) uMnu Nelson Chamisa abe lowakhe eHarare. Ibandla leZanu PF lalo lizakuba lomhlangano eMarondera ngosuku olufanayo.
*** Uthi ulethemba lokuthola imiklomelo emithathu kulimpelaviki umqeqetshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu.
*** Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo we Afro Pop, uMakhosini Dominic Nkomo odume ngegama lakhe kwezokucula lokuthi Makhoe Drey.
***KuLivetalk namhlanje siqhubekela phambili sikhanglea amalungiselelo wokhetho lwamaBy-Elections oluqhutshwa mhlaka 26 ngenyanga ezayo kaMbimbitho kanye lohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe Voter Registration olwenziwa ngabeZEC.